Deg-Deg: Dil Goor dhow ka dhacay Muqdisho -
Deg-Deg: Dil Goor dhow ka dhacay Muqdisho
Waxaa Suuq Boocle ee degmada Dharkenlay lagu dilay Askarigii Ciidanka ilaalada deegaanka Ama Mina shiibiyada ee uqaabilsanaa suuqaas canshuur aruurinta ayaa goordhow waxaa Gudaha suuqa ku dishay laba dhalan yaro ah oo Bistoolado ku hubaysana.
Labada dhalin yarada ah markii dilka ay geysteen waxay meeshas ka raaceen Mooto laba lugaaleyda sida dadka deegaanka ay sheegeen.
Askariga ladilay ayaa lagu magacaabayay Abshir Beey.
Sargaal ka mid ah ciidanka Booliska Degmadaas oo si hoose ula hadlay war baahinta Tusmotimes.com ayaa waxaa uu sheegay in askariga la dilay uu ahaa nin shacabka canshuurta uu ka soo aruurinayaayay unaxariista.
Suuq Boocle ee degmada Dharkenlay ayaa ah mid markasta lagu dilo askarta Canshuurta qaabilsan.
Wixii faa faahin dheerad ah ee ku soo kordha dilkan ayaa idiin soo gudbinaynaa, Insha Allaah.
Related Items:Featured, Mogadishu, Somali News, Somalia
Police: Hostage situation at restaurant in Somalia’s capital
Warar dheereed ah oo laga helayo dagaal dhexmaray Ciidamada DFS iyo Al-shabaab